ကဲ...ဘော်ဘော်တို့ရေ..သမီးစံ..မအားတော့ဘူးကွယ်..ဒါ့ကြောင့်အိမ်လေးခဏထားခဲ့ရအုံးမယ်။ အနည်းဆုံးတော့နှစ်ပတ်ပေါ့။အများဆုံးကတော့သုံးပတ်ခွဲ(မမူးလောက်ပါဘူးနော်...းP) ကြာမယ် ထင်ပါတယ်..ပထမ တော့ကွယ်.. တစ်ခါတုန်းက.. ပုံပြင်လေးနဲ့ လာသမျှလူတွေကို စောင့်ဖမ်းမလို့ပါပဲ။ နောက်တော့.. ပို့စ်အသစ် တင်တာ မတွေ့ရင်. .ယုန်ထင်၊ကြောင်ထင်.ထင်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ ။ သမီးစံတစ်ယောက်အသစ်မ တင်နိုင်ရ အောင်ဘယ်တွေ များပျောက်နေပါလိမ့်။ “ပါ”များသွား ပြီလားဆို ပြီးတော့လေ. (အထင်ခံရလည်းမနည်းပါဘူးနော်း))..။ အဲသလိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေး.. ပြောပြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့. ပိုင်ရှင်မရှိပေမယ့်.. အိမ်လေးကိုလာ လည်စေ ချင်ပါတယ်။ အထဲမှာလည်း facility အပြည့်ထည့်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။ (ဘာရယ်ညာရယ်ဟုတ်ပါဘူး.. လူရှိန်တာပေါ့နော်..)။ ကြည့်စရာရှိတာတွေ၊ ဖတ်စရာရှိတာတွေ၊ လှန်လှောပြီးတော့သာဖတ်သွား ၊ ကြည့်သွားကြပါလို့...နော.. ပြီးရင်လည်းသပ်သပ် ရပ်ရပ်လေးပြန်ထားသွားအုံးနော်..(ချို၊ချင်း၊စေရာ၊မိဘုန်း၊ဂျက်တို့ကိုပြောပါတယ်..အဲဒီ“မျောက်မူးလဲ”လေးတွေကအတော်ဆိုးတာကိုး:D)။
ခုချိန်မှာတော့...ဘယ်သူ့ဆီမှမသွားနိုင်သလို ..ဘယ်သူ့ဆီမှလဲမအော်နိုင်၊ မမန့်နိုင်လို့ဝမ်း“မ”သာနိုင်ပါရှင်။ အဲဒီအတွက် စိတ်လည်း မကောင်းပါဘူးနော်။ဒီကြားထဲ..စာမေးပွဲရှိတော့..ဖြေနိုင်အောင်လို့..ဓာတ်လိုက်၊ဓာတ်ကင်...လည်း လုပ်ဖို့ ရှိသေး အဟီး(“ဘုန်းဘုန်းချယ်ရီချက်”မသိပါစေနဲ့နော်သယ်ရင်းတို့..:P).ဒါကြောင့်မို့. .ဘုန်းဘုန်းများ၊ အစ်ကို၊အစ်များ၊ မောင်ညီမလေးများတို့ရေ. .တာ့တာပါနော်...။ခဏတော့ခွဲကြအုန်းစို့ကွယ်..။
ချယ်ရီမြေ September 5, 2011 at 10:09 PM
ဟားဟား... `ဇယန္တော´ အောင်ဂါထာ သက်စေ့ရွတ်ပြီး ဓာတ်ကင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် သမီးစံရေ... အောင်မြင်ပါစေ
မောင်ဘုန်း September 5, 2011 at 10:20 PM
ဟုတ်ပါပြီ .... ကြည့်ထားလိုက်မယ် ... အပျိုးကြီး ...
ဒါနဲ့.... အဲ့ဒီ ပုံက အပျို ကြီးရဲ့ တူမလေးပုံထင်တယ်နော်
ကဲ ...ဆုတောင်းပေးအုံးမယ် ....
အပျို ကြီး တစ်ယောက် အခုဖြေမဲ့ သီလရှင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပါစေလို့ 
Anonymous September 5, 2011 at 10:39 PM
jasmine(တောင်ကြီး) September 5, 2011 at 11:06 PM
ချယ်ရီမြေ September 6, 2011 at 2:57 AM
ဟားဟား..... `ဇယန္တော´အောင်ဂါတာနဲ့ ဓာတ်ကင်ပေးပါ့မယ်...
အိမ်မက်စေရာ September 6, 2011 at 7:17 PM
တစ်ခုခုပဲ နော်.. စာပေးပွဲ တစ်ခုထဲ တင် မကဘူးထင်တယ်..( jk )
သမီးစံ September 6, 2011 at 7:41 PM
Candy September 6, 2011 at 9:59 PM
KMC@ချင်းလေး September 6, 2011 at 10:55 PM
တောက်ပကြယ်စင် September 6, 2011 at 10:59 PM
ပိုင်ရှင်မရှိတုန်းလေး လာလည်သွားတယ်ဟေ့။ (စားစရာရှိတာလေး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ခူးခပ်ယူစားသွားပါတယ်။ အဲ ဟုတ်ဖူး ဖတ်စရာရှိတာတွေ ရှာဖတ်သွားတယ် ပြောတာ။ ဟီး။) စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ပါစေနော်။ (မိန်းခလေးဖြစ်နေပေမယ့် ရယ်စရာလေးတွေတော့ ကြားညှပ်ညှပ်ပြီး ပြောတတ်သားနော်)။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ပါစေ မိစံရေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 7, 2011 at 10:46 AM
ဘလော့ဘန်နာထဲက မျက်လုံးပြူးပြူးကောင်မလေးဟာ သမီးစံရဲ့ ပုံထင်ပါရဲ့ ။
8Yar September 8, 2011 at 11:02 AM
ဟောဂျာ။ လုပ်ပြီ သမံစီးတို့ကတော့။ တတ်နိုင်ဘူး သူမရှိတုန်းမွှေလိုက်အုံးမယ်။ အဲလေ စောင့်ရှောက်ထားပါ့မယ်လို့။ ဟီး..
san htun September 12, 2011 at 6:57 AM
စားမေးပွဲ ဖြေနိုင်ပါစေနော်...အိမ်လေးကိုလည်း ပိုင်ရှင်မရှိတုန်း ဂျွှမ်းထိုးမောက်ခုံဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်မယ်..စိတ်သာချ... :D
မောင်မောင် September 18, 2011 at 2:17 AM
ခင်တဲ. မောင်မောင် (မြစ်ဆုံ)